Azerbaijan: Tontolon’ny blaogy mavitrika · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 27 Jolay 2018 4:57 GMT
Ao amin'izay lasa tontolon'ny blaogy mavitrika indrindra tao Atsimon'i Kaokazy, ary indrindra amin'ny teny anglisy, manohy ny fanoratana lahatsoratra mankarary fo ireo blaogera azeris. Tao anatin'ny fotoana nisehoan'ilay famonoana mpianatra maro tamin'ny 20 Aprily tao amin'ny Akademian'ny Solitany tao Azerbaijan, ary avy eo ny fisamborana nisesisesy ireo tanora mpikatroka sy blaogera amam-polony sasany [amin'ny teny anglisy, toy ireo rohy rehetra manaraka], mampahafantatra ireo mpamakiny ny tohin'ity loza mahatsiravina ity ny Flying Carpets and Broken Pipelines («Karipetra manidina sy fantsombe tapaka»).
Mandinika mikasika ny fanoherana karakaraina aoriana fety momba ny voninkazo ao Bakou renivohitra ihany koa ny Sins against Democracy («Fahotana manohitra ny demokrasia»), nefa tsy nisy akony ny antso ho amina andro nasionaly natokana ho fisaonana. Kanefa mandefa fomba fijery maivamaivana kokoa momba ireo fisamborana sy ny fakan'ny polisy vehivavy mpandalo iray tsy manan-tsiny noho ny akanjony fotsiny ilay blaogy.
Mandritra izany fotoana izany, manontany tena ny Fighting Windmills ? Take a Pill («Amperin'ady amin'ireo milina fitotoana ahodina rivotra? Makà vongam-panafody») hoe fa maninona no matetika tsikerain'ireo blaogera ny zavatra tsy rariny mahazatra any amin'ny firenena toa an'i Azerbaijan sy ireo mpifanolobodirindrina aminy ao amin'ny faritra. Tsotra ny valinteny, hoy ilay blaogera:
Indrisy anefa, noho ny fandrarana ny fandefasana fandaharana vahiny an'onjam-peo natao tany am-piandohan'ny taona tao amin'ny firenena, ary miaraka amin'ireo fanavaozana ny fandrindràna ireo ONG ho anaty fantsona, maro ireo matahotra fa hitodika tsy ho ela any amin'ny Aterineto ireo manam-pahefana.